Podcast dokambarotra dia tonga amin'ny taona | Martech Zone
Miaraka amin'ny fitomboan'ny podcasting tsy mampino nandritra ny taona maro, tsapako ho toa niadana ny fampifanarahana ny teknolojia fanaovana dokambarotra tamin'io. Tsy misy antony kely na tsy antony tsy itondrana ny paikadin'ny dokam-barotra mitovy amin'ny horonantsary amin'ny podcasting - na doka alohan'ny horonan-tsary aza, ohatra.
Ny doka nampidirina tamin'ny dinamika dia nampitombo ny anjarany tamin'ny fandaniana doka tamin'ny 51% hatramin'ny 2015 ka hatramin'ny 2016 araka ny Fianarana momba ny vola miditra amin'ny doka Podcast IAB. Manantena ny hamafin'ny fampidirana doka aho. Miaraka amin'ny algorithma, azo antoka fa afaka mamorona algorithms isika handrindrana doka amin'ny fiatoana voajanahary ao anaty rakitra audio (ampahafantaro ahy raha mamorona an'io vahaolana io ianao… Te hanana trosa aho).
Vao avy namoaka zavatra tsy mampino aho tafatafa niarahana tamin'i Tom Webster an'ny Edison Research izay hiresahantsika ny taloha sy ny ankehitriny ary ny hoavin'ny podcasting. Ao anatin'izany no hiresahantsika ny fitomboan'ilay fantsom-pahalalana amin'ny mpivarotra. Raha ny marina, nihoatra ny $ 200 tapitrisa ny dokambarotra podcast tamin'ny taon-dasa, avo roa heny noho izay vao roa taona lasa izay, araka ity infographic ity, Ny fipoahana Podcast infographic, avy amin'ny Concordia University St. Paul Online.
Ny mpanao gazety dia nampifandray ny fisondrotan'ny podcast amin'ny fahita lavitra amin'ny finday avo lenta finday, fotoana laniana mandritra ny fitaterana ary serivisy mozika an-tserasera. Ny hafa dia manondro azy io amin'ny fiatraikany mandrisika sy mampiankin-doha amin'ny fianarana audio, na ny mety ho fihainoana marobe. Ny hatsarana dia ao amin'ny overlap. Angamba ny singa miafina podcasting dia ny maha-maro azy tsara kokoa noho ny fitaovana hafa, mitondra doka famokarana any amin'ny faritra rehetra fanaonao isan'andro.
Aiza ny olona no mihaino podcast? Araka ny Midroll
52% ny mpihaino podcast no mihaino mandritra mitondra fiara
46% ny mpihaino podcast no mihaino mandritra nandeha
40% ny mpihaino podcast no mihaino mandritra mandeha, mihazakazaka na mandeha bisikileta
37% ny mpihaino podcast no mihaino mandritra commuting amin'ny fitateram-bahoaka
32% ny mpihaino podcast no mihaino mandritra miasa
Ity ny sary feno, Ny fipoahana Podcast: jery todika amin'ny endrika iza, inona ary inona no endrika mampiaiky indrindra an'i Audio
Tags: Ad insertOniversite Concordia St. Paul Onlinefikarohana an'i EdisonIABSary torohayfampidirana doka podcastfandaniana doka podcastdoka podcastdoka podcastfitomboan'ny doka podcastmpihaino podcastfandalinana fidiram-bola podcaststatistika podcastny fipoahana podcasttom websterrahoviana ny olona no mihaino podcast